Ndị a bụ ụfọdụ azụmaahịa kachasị mma na Amazon's Black Fridady maka taa | Akụkọ akụrụngwa
Amazon abụrụla ebe a na-ekwu okwu n'ahịa ahịa kọmputa, n'ime izu a ọ na-enyerịrị onyinye dị mkpa nke nnukwu akụkụ nke katalọgụ ya, na-eche November 24 na-esote, ụbọchị nke etiti abalị egbe ga-ebido na onyinye ga-amalite ịpụta wee pụọ na weebụsaịtị Jeff Bezos.
Mana mgbe Fraịde na-eme, n’isiokwu a anyị na-egosi gị ụfọdụ ihe onyinye kachasị mma anyị nwere ike taa Wednesday November 22 na Amazon. Onyinye niile dị maka awa ole na ole na nkeji ole na ole, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla, ị na-ewerela oge.
1 Koogeek Digital Arm Blood Pressure Monitor
2 Isi okwu ekweisi ikuku VULKKANO
4 Canon EF 50mm F / 1,4 USM oghere
5 SanDisk 250GB SSD Draịvụ
Koogeek Digital Arm Blood Pressure Monitor
Otu n'ime ihe nlere ọbara kacha mma anyị nwere ike ịchọta na Amazon, nwere oke uru maka ego. Karịsịa ọ bụ nke m na-eji eme ihe mgbe niile na nha ya bụ otu ihe dọkịta ahụ ma ọ bụ ụlọ ahịa ọgwụ nwere ike inye anyị. Ọ bụrụ na i lee anya na ọbara mgbali nyocha, ndị na ogwe aka bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya karịa ndị na nkwojiaka, Ya mere ọ bụrụ na ị na-atụgharị uche na otu maka nkwojiaka na nke ọzọ maka ogwe aka, nke ikpeazụ karịrị ihe akwadoro. Ọnụ ego mbụ nke Koogeek na-enyocha ọbara mgbali elu bụ euro 70,99 ma taa anyị nwere ike inweta ya maka euro 51,99 obere.
Koogeek Bluetooth Wifi Arm Arm Pressure Monitor
Isi okwu ekweisi ikuku VULKKANO
Igwe okwu ikuku Bluetooth aghọwo ngwaọrụ nkịtị n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ n'ihi nkasi obi ọ na-enye anyị. N'oge Black Friday anyị nwere ike ịchọta VULKKANO Ọrụ maka naanị 21,99 euro, na nwepu ego nke euro 8 na ọnụego ya nke bụ 29,99 euro.
VULKKANO nọ n'ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị ọnụ ala wearable na-enye gị ohere jikwaa ihe niile ị na-eme kwa ụbọchị nke ị na-eme, TomTom na-eme ka TomTom SPARK 3 dị anyị n'oge Black Friday maka naanị euro 179, mgbe ọnụahịa ya bụ euro 224.
TomTom SPARK 3 Cardio + Egwu
Canon EF 50mm F / 1,4 USM oghere
Ọ bụrụ na foto bụ ihe anyị, n'oge ụbọchị na - eduga na Black Friday, anyị nwere ike ijide oghere 50mm Canon nwere oghere f / 1,4 na ngwa ngwa ngwa ngwa maka naanị euro 299, maka euro 341,21 nke ị na-enwekarị.
SanDisk 250GB SSD Draịvụ
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inye ndụ ọhụụ na kọmpụta anyị, nhọrọ kachasị mma bụ iji dochie diski ahụ na diski ike siri ike, na-ahapụ usoro nke ndụ niile na onye ọsọ ọsọ ya dị obere karịa nke ndị siri ike. ScanDisk tinye ihe mkpofu anyị nwere ụdị 250 GB maka euro 79,89, maka euro 110 nke ọ na-akwụkarị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe kacha mma Amazon Black Fridady na-eme maka taa